किन बस्छ आँखामुनी ‘डार्क सर्कल’ ? घरेलु उपचारबाटै यसरी हटाउन सकिन्छMain Samachar
किन बस्छ आँखामुनी ‘डार्क सर्कल’ ? घरेलु उपचारबाटै यसरी हटाउन सकिन्छ
२० चैत्र २०७७, शुक्रबार १५:०० प्रकाशित
काठमाडौँ । प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो अनुहार सँधै चम्किरहोस् भन्ने चाहन्छ । अनुहारको स्वास्थ्यका लागि मानिसहरु बढी नै संवेदनशील रहन्छन् । तर, स्याहारसुसार गर्दापनि विभिन्न समस्याहरु देखिनै रहन्छन् । यसमध्यकाे एक हाे ‘डार्क सर्कल’ । आँखाको तल्लो भागमा कालो धब्बा र घेरा बस्छ । आँखामुनि कालो हुनुको कारण हामी निन्द्रा नपुग्यको बुज्ने गर्छौ तर विभिन्न भिटामिनहरुको कमिले गर्दा त्यस्तो दाग बस्ने गर्छ ।
कालो धब्बा आफैमा छालाको रंग होइन, बरु रगत र पानीको प्रवाहको कम हो । दिनमा यस्ता धब्बा अझै स्पष्ट देखिन्छ । सुख्खा हुँदा यस्तो धब्बा बढी नै देखिन्छ ।
डार्क सर्कल बस्नुको मुख्यमुख्य कारणहरु यस्ता छन्ः
शरीरमा आइरनको कमी भयो भने आँखामुनि कालो घेरा देखिन्छ। आइरनको कमीका कारण छालाका कोशिकाले पर्याप्त अक्सिजन पाउँदैनन्। एनिमियापीडित र आइरनको अत्यधिक कमी भएका महिलाका आँखा वरिपरिको छाला मृतप्रायः देखिन्छ। आइरनका लागि पालंगो, दाल, गेडागुडीलगायत खानुपर्छ।
भिटामिन ‘सी’को कमी
आँखामुनि कालो घेरा देखिनुको एक कारण भिटामिन ‘सी’को कमी पनि हो। भिटामिन ‘सी’ले छालालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। यसका लागि कागती, सुन्तलालगायत खान सकिन्छ।
भिटामिन ‘ए’को कमी
भिटामिन ‘ए’ ले छालामा एन्टी अक्सिडेन्टको काम गर्छ। छाला चाउरिनबाट जोगाउँछ। आँखामुनि देखापर्ने कालो घेराबाट राहत दिन्छ। गाजर, ब्रोकाउली, पेस्ता, आँप आदि भिटामिन ‘ए’ का स्रोत हुन्।
भिटामिन ‘के’ को कमी
छालाका सुरक्षाका लागि भिटामिन ‘के’ को कमी हुन दिनु हुँदैन। यस भिटामिनको काम आँखामुनि कालो घेरा पर्न नदिनु हो। शरीरमा भिटामिन ‘के’ कम भयो भने आँखा वरिपरिको छाला निस्तेज देखिन्छ। यो भिटामिनका लागि खानामा हरियो सागपात, काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, माछालगायत खानेकुरा खानुपर्छ।
भिटामिन ‘ई’को कमी
आँखामा पर्ने डार्क सर्कलका लागि भिटामिन ‘ई’ को कमी पनि जिम्मेवार छ। यस भिटामिनको कमीले छाला निष्प्राण देखिन्छ। छालालाई स्वस्थ र चम्किलो राख्न बदाम, एभोकाडो, किवी, जैतुन तेल, ट्राउट माछा खानुपर्छ।
व्यवस्थित खानपान सँगै यस्ता घरेलु उपचारबाट पनि आँखाको डार्क सर्कल हटाउन सकिन्छ
टमाटर र कागती
एक चम्चा टमाटरको रसमा एक चम्चा कागतीको रस मिलाएर आँखाको वरीपरी लगाउने र १० मिनेटपछि चिसो पानीले धुने । यो प्रक्रिया हप्तामा ३ वा ४ पटक गर्दा आँखाको डार्क सर्कल बिस्तारै हराएर जान्छ ।
आलुलाई सानो सानो टुक्रा बनाई ग्रान्डरमा पिस्ने । यसरी पिसिएको आलुको रसलाई रुवा वा नरम कपडालाई भिजाएर आँखाको कालो भागमा राख्ने । यसो गर्दा डार्क सर्कल बिस्तारै हराएर जान्छ ।
ग्रीन टीको ब्याग
ग्रीन टी वा साधारण टी ब्यागलाई प्रयोग गरिसकेपछि केही समय फ्रिजमा राख्ने । त्यो ब्यागलाई आँखाको कालो भागमा राखेर हल्का घुमाउने । यस्ले डार्क सर्कल हटाउछ ।
राती सुत्नु अगाडी रूवा वा नरम कपडालाई गुलाब जलले भिजाई आँखामा १० मिनेट राख्ने र मनतातो पानीले धुने । यसो गर्दा एक महिनामा डार्क सर्कल हराएर जान्छ ।
यसका साथै भिटामिन ‘ए’युक्त खानेकुरा जस्तै– फर्सी, पाकेको मेवा, गाँजर, आँप, हरियो सागपात आदि खानुपर्छ । जसले छालाको रिपेयरिङ र टाइटानिङमा मद्दत गर्छ । जस्ले डार्क सर्कल बस्न दिदैन ।
उकालो लाग्यो कोरोनाको ग्राफ, स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा उदासीनता
चौबिस घण्टामा थप ३ सय ६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
पोखरा इन्स्टिच्यूशनल कुलिनरी च्याम्पियनसिपको उपाधि मलवेरीलाई
१५ तस्बिरमा हेर्नुहोस्, टुँडिखेलको घोडेजात्रा
सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुमा खनाल–नेपाल समूहको समानान्तर कमिटी घोषणा
शिवपुरी जंगलमा लागेको डढेलो निभाउन हेलिकप्टरबाट पानी बर्साइयो
महाकाली–मेची जागरण अभियानः भरतपुरमा मोटरसाइकल र्‍याली
काँग्रेस पदाधिकारी बैठक शुरु, देउवा र पौडेल अनुपस्थित
सोना आमात्यको ‘मेरो माया करोडमा’टिकटक प्रतियोगिता , बिजेतालाई ५० हजार र फोन
तीन दलको बैठकअघि देउवाको आक्रामक अभिव्यक्तिः ‘ओलीले लात हानेपछि प्रचण्डलाई ठिक भएको छ’